पूर्वकूटनीतिज्ञ एवं साहित्यकार यदुनाथको नाममा हुलाक टिकट प्रकाशित
पूर्वकूटनीतिज्ञ एवं साहित्यकार प्रो. यदुनाथ खनालको संस्मरणमा हुलाक सेवा विभागले रु. १० दरको हुलाक टिकट प्रकाशित गरेको छ ।
उक्त टिकट प्रकाशनको प्रथम दिवसीय टाँचा मंगलवार काठमाडौंमा एक समारोहका बीच हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक देवीप्रसाद ज्ञवालीले लगाएका हुन् । विभागले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेका टिकटमध्ये यो अन्तिम टिकट हो ।
विसं २०६१ साल असोजमा दिवंगत खनाल शिक्षाविद्, कूटनीतिज्ञ तथा साहित्यकार (समालोचक) थिए ।
कूटनीतिक सेवामा रहँदा खनालले भारत, चीन र अमेरिकामा नेपालको राजदूतको रूपमा काम गरेका थिए । नेपालको लागि सर्वाधिक महत्त्व राख्ने दुई छिमेकी र अमेरिका गरी तीन वटै देशमा राजदूत भएर काम गर्ने उनी अहिलेसम्मका एकमात्र कूटनीतिज्ञ हुन् ।
खनाललाई संस्कृत, नेपाली र अंग्रेजी तीन वटै भाषामा दख्खल राख्ने विद्वान्‌को रूपमा चिनिन्छ ।
एक समय त्रि-चन्द्र कलेजका प्राध्यापक रहेका खनाल पछि निजामती सेवामा प्रवेश गरी पहिले गृह मन्त्रालय र पछि परराष्ट्र मन्त्रालयको सेवामा रहे । एक समय लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष भएर पनि उनले सेवा गरेका थिए ।
उनको जीवनी लेख्ने डा. जयराज आचार्यको संयोजकत्वमा आज काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर राणाले खनाल नेपालका लागि हेनरी किसन्जर नै हो भन्ने मन्तव्य राखेका थिए ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले कुनै बेला राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा खनाललाई परराष्ट्र मन्त्री हुन प्रस्ताव गरी खबर पठाउँदा पद अस्वीकार गरेको स्मरण गरे । तर पछि उनले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष रहेर काम गर्ने प्रस्ताव भने स्वीकार गरेका थिए ।
खनालले नेपालको कूटनीति सेवाका लागि उपयोगी हुने र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा अभिरुचि राख्ने जोसुकैलाई काम लाग्ने गहकिला पुस्तकहरू लेखेका छन् ।